INDLU KA-ANTONELLA / esanda kulungiswa - I-Airbnb
INDLU KA-ANTONELLA / esanda kulungiswa
Bresso, Lombardia, i-Italy
Ikhishi elikhanyayo elikhanyayo, elisanda kulungiswa kanye nezinto ezintsha zikagesi, lizungezwe iParco Nord Milan, imizuzu embalwa ukusuka ku-Subway Line 5 / University Milano Bicocca / Isitolo esikhulukazi Esikhulu, Ichibi Lokubhukuda, Izindawo zokudlela kanye Nezindawo Zokubha ngaphakathi kwebanga lokuhamba.
Ifulethi lingakwazi ukuhlalisa abantu abangaba ngu-3, 2 ekamelweni lokulala kanye nombhede we-sofa ongu-1 uma kunesidingo ekhishini. Indlu itholakala ezitezi ezimbili zokuqala ze-duplex, ethule futhi enokuthula enengadi yangasese endaweni ethule eseduze neNorth Park, imizuzu emi-5 ukusuka eMilan futhi ihanjiswa kahle ngezinto zokuhamba ezitholakala kumamitha ayi-100 ukufika: (Umugqa woku-1 ubheke ngasentshonalanga. IDuomo neRho Fiera, iGaribaldi Station Line 5, kanye neZara, Central Station Line 3).
4.78 · 246 okushiwo abanye
indawo ethule, eluhlaza okotshani okuyisinyathelo esisodwa ukusuka eNorth Park enhle (amahektha angama-640 amanzi aluhlaza anwebeka phakathi kwamadolobha aseMilan, Bresso, Cusano Milanino, Cormano, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni) -izinyathelo ezimbalwa ukusuka lapho uzothola indawo yokucima ukoma. , i-hypermarket enkulu futhi egcwele ngokugcwele futhi ingaba nesidlo sasemini / isidlo sakusihlwa ne-Italian, Asian noma i-sushi.
Ngena kusukela ngo-16:00
Phuma ngo-11:00 am
Ukwamukela kuzokwenziwa nami noma nesithunywa sami somndeni, esizochaza ukusebenza kwendlu.
Hlola ezinye izinketho ezise- Bresso namaphethelo